Dowlada Soomaaliya oo si adag uga Jawaabtay hadalkii kasoo yeeray Maamulka Puntiland | shumis.net
Home » Layaab » Dowlada Soomaaliya oo si adag uga Jawaabtay hadalkii kasoo yeeray Maamulka Puntiland
Dowlada Soomaaliya oo si adag uga Jawaabtay hadalkii kasoo yeeray Maamulka Puntiland
Ra’isul Wasaare ku xigeemka Xukuumada Soomaaliya Maxamed Cumar Carte, oo la hadlay Idaacada BBC-da ayaa ka hadlay hadalkii shalay kasoo yeeray Maamulka Puntiland ee ku aadanaa in Dowlada Federaalka ay ku lug leedahay Shabaabka gaaray Deegaanada Puntiland.
Maxamed Cumar Carte , ayaa sheegay dagaalyahanada Al-Shabaab katirsan Deegaanada Puntiland ay yihiin kuwa meel ka guuray meel kalana u guuray, waxa uuna ku baaqay in si wadajir ah looga soo wada jeesto .
Ra’isul Wasaare ku xigeenka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay hadalkii kasoo yeeray Wasiirka Amniga ee maamulka Puntiland kaa oo Dowlada Soomaaliya ku eedeeyay in ay ku lug leedahay Shabaab kusoo firxaday deegaanadooda.
”Waan ka xunahay in masuuliyiinta Puntiland ay hadalka dhinac kale u dhgaan kuna eedeeyaan Dowlada Federaalka Shabaabka meel ka guuray meel kalana degay, waxaana muhiim ah in meel uga soo wada jeesano kooxdaasi ” Ayuu yiri Mr Carte.
Maamulka Puntiland ayaa ku eedeeyay Dowlada Federaalka Soomaaliya in ay ku lug leedahay Shabaabka deegaanadooda soo gaaray, waxa ayna Puntiland ku micneesay in ay arintan ka dhalatay diidmadii nidaamka 4.5.ta ahaa ee diideen.
Title: Dowlada Soomaaliya oo si adag uga Jawaabtay hadalkii kasoo yeeray Maamulka Puntiland
Posted by galmada Net, Published at March 16, 2016 and have 0 comments